Kumaa la is oran karaa wuu badali karaa Hogaamiyihii Al-Qaacida? (Warbixin+Sawiro) – SBC
Kumaa la is oran karaa wuu badali karaa Hogaamiyihii Al-Qaacida? (Warbixin+Sawiro)
Posted by editor on May 17, 2011 Comments
Ka dib dilkii hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Cusaama Bin Ladin oo lagu diley dalka Pakistaan 2-dii bishan May ayaa waxaa wali la sugayaa cidii badali laheyd oo ay magacaaban Al-Qaacida.
Hay’adaha dhanka sirdoonka & quburada arimaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ayaa goor sii horeysay waxay sheegeen inay mudo qaadan doonto magacaabista ninkii badali lahaa Cusaama iyagoo taasi u sababeey dhawr arimood oo kala ah.
1: Al-Qaacida oo dib u habeyn ku sameynaysa hawlaheeda maamulka, mukhaabaaradka, dhaqaalaha, military-ga iyo laamaheeda kala duwan ka dib dilkii Cusama Bin Ladin taasina ay ugu weyn tahay xog badan oo la xiriirta hawlahooda oo u gacan gashay sirdoonka Mareykanka taasi oo badalkeeda waqti qaadan karta.
2: Al-Qaacida madaxdeeda oo la aaminsan yahay inay badalan doonaan xarumihii ama fariisamihii ay lahaayeen madaxdeeda, isla markaana aanay dhici karin in ay si sahal ah isagu yimaadaan goob amaan ah oo ay ku nabad galaan taasi oo ay ugu wacan tahay xogta sirdoonka Mareykanku heleen oo ay tahay 100% in Al-Qaacida dib u habeyso xogteeda & xarumaha madaxdeeda.
3: Ninka badali doona Cusaama oo ay dhici karto in uu keeno muran waqti qaadan kara iyadoo ay jirto in Al-Qaacida hogaankeedu ay goor sii horeyseyba u muuqanayaan in ay u kala safan yihiin hogaamiyeyaal Carab ah & kuwa aan Carab aheyn.
4: Hogaamiyeyaasha Carabta qudhooda oo u muuqanaya in ay ku kala fadli badan yihiin hogaanka kooxda, waxaana soo baxaya xan hoose oo sheegaysa in hogaamiyeyaasha Al-Qaacida ee ka soo jeeda Sacuudiga ay aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin hogaaminta Al-Qaacida.
Hadaba arimahan ayaa la oran karaa waa kuwa ilaa iyo haatan ay u xayiran tahay magacaabista cidii badali laheyd hogaamiyihii Al-Qaacida Cusaama Bin Ladin, waxaana qoraalkan ku eegi doona ragga ilaa iyo haatan farta lagu fiiqayo inay u sharaxan yihiin jagadaasi.
1: Ayman al Zawahiri,
Ayman Muhammad Rabaie al-Zawahiri waa dhakhtar u dhashay wadanka Masar wuxuu ku dhashay magaalada Qaahira 19-kii June sanadkii 1951-dii.
Dadka la socda taariikhdiisa waxay sheegaayaan in isagoo yar oo 15 sano jir ah ay ku bidey layrta Jihaadka, waxaana xiligaasi isagoo yar uu aasaasay urur Islaami ah oo hadafkiisu ahaa in dalka Masar lagu xukumo shareecada Islaamka.
Tan iyo xiligaasi wixii ka dambeeyey wuxuu ku lug lahaa hawlgalo iyo olole ku saleysan Jihaad & dhaqdhaqaaqyo Islaami ah oo ka oognaa dalka Masar, isagoo ururkiisa ay ka dambeeyeen dilkiii Madaxweynihii hore ee Masar Anwar Al-Sadat.
Dilkaasi oo dhacay sanadkii 1981-kii ka dib al-Zawahiri xabsiga ayaa la dhigay waxaana uu ku jiray xabsiga mudo sadex sano ah balse waa la siidaayey sanadkii 1984-tii.
Markii la siidaayey al-Zawahiri wuxuu sii watey arimihiisii waxaana la sheegay in sanadkii 1986-dii ay ku kulmeen Cusaama Bin Ladin wadanka Sacuudiga waana halka ay ka bilaabatey saaxiibtinimadooda iyagoo xiligaasi wixii ka dambeeyey ka qayb qaatey dagaalkii Mujaahidiintii Carbeed Midowga Soofiyeeti kaga xoreeyeen wadanka Afgaanistaan.
Tan iyo xiligaasi wixii ka dambeeyey waxay ahaayeen rag saaxiibo ah ilaa ay sanadkii 1998-kii si wadajir ah u soo saareen fatwa ay ku sheegeen in dagaal la gali doonaan Mareykanka.
In uu badalo Cusaama Bin Ladin waxay ka dhigan tahay 80%, laakiin waxaa horyaal caqabad weyn ooah in hogaamiyeyaasha Al-qaacida ee Sacuuudiga u dhashay aanay dooneyn in qof iyaga ka baxsan uu noqdo hogaamiyaha Al-Qaacida.
2: Saif al Adel
Saif al Adel waxaa kale oo uu leeyahay magacyada Muhammad Ibrahim Makkawi, Ibrahim Al-Madani , Omar al-Sumali wuxuu u dhashay Masar, xiliga uu dhashay waxaa ku jira shaki taariikh ayaa qoraysa 1960 halka ay jirto mid kale oo sheegaysa 1963-dii, laakiin 11-ka April ayaa la hubaa oo ah bisha iyo maalinta uu dhashay.
Saif al Adel wuxuu ka tirsan yahay golaha shuurada Al- Qaacida (majlis al shura of al-Qaeda) sidoo kale wuxuu xubin ka yahay gudiga military-ga ee Al-Qaacida, waxaa la sheegaa in uu ku lug lahaa weerarkii lagu diley madaxweynihii hore ee Masaarida Anwar Al-Saadaat, waxaa jirta warar sheegaya in uu kaalin weyn ku lahaa tababarida & u gudbinta wararka sirdoonka kooxaha Islaamiyiinta ee wadamada Masar, Afgaanistan, Sudan & Somalia.
Warar dhanka sirdoonka ayaa sheegaya in uu ka qayb qaatey dagaalkii Muqdisho ku dhexmarey ciidamadii Mareykanka & xoogagii daacada u ahaa Jen. Caydiid sanadkii 1993-kii inkastoo aanay jirin cadeymo arimahaasi xaqiijinaya.
Warar kale ayaa sheegaya in uu ka aasaasay deegaanka Raaskambooni ee ku dhaw xuduuda Soomaaliya ay laleedahay Kenya xero lagu tababaro kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya.
Saif al Adel arimaha caqabada ku ah ee horyaal waxaa ka mid ah in uu diiday in uu ka qayba qaato weeraradii 9/11 ee lagu qaadey Mareykanka, sidoo kale sanadihii 2006-dii wuxuu qoray qoraal ku socdey hogaamiyeyaasha Al-Qaacida oo uu ku sheegay in Cusaama Bin Ladin uu ka diiday in uu ka qaato talooyin badan, waxaana la sheegay in xiligaasi ka dib Cusama uu darajada Saif meel hoose ka dhigay oo uu ka sare mariyey xubno kale.
Abu Yahya al Libi wuxuu leeyahay magacyo kala duwan sida Hasan Qaiid (Hasan Qayad ama Hassan Qayid) & Yunis al-Sahraw, sidoo kale waxaa loo yaqaan Hassan Qaed al-Far,
Al Libi wuxuu u dhashay Liibiya, taariikhda dhalashadiisa maalin iyo bil lama hayo waxaase la hayaa sanadkii 1963-dii in uu dhashay, wuxuu ka mid yahay xubnaha aadka muhiimka ugu ah Al-Qaacida.
Abu Yahya al Libi wuxuu u gacan galay ciidamada Mareykanka sanadkii 2002-dii xiligaasi oo ahaa sanad ka dib markii Mareykanku uu duulaanka ku qaaday Afgaanistan waxaana lagu xiray xabsiga Begram ee ku dhaw magaalada Kabul laakiin 2005-tii ayuu xabsiga ka baxsadey.
Abu Yaxya al Libi waa nin aad ugu muhiim ah AL-Qaacida, waa Gabyaa, waa tababare, waa wacdiye waa muhandis, wuxuu ku hadlaa Luuqadaha Carabiga, Urduga & Pashtunka.
Sanadkii 2008-dii wuxuu soo saarey fariin muuqaal ah uu soo saarey Al-Libi wuxuu kaga hadley arimaha Soomaaliya isagoo ugu baaqay Soomaalida inay jihaadaan oo ay iska dhiciyaan cadowga ALLE, wuxuuna fariintiisa uu ugu nasteexeeyey xoogaga Al-Shabab inay u dulqaataan Jihaadka oo ay u samraan guushuna ay dhawdahay.
Sa’ad bin Osama bin Muhammad bin ‘Awad bin Laden waa wiilka sadexaad ee wiilasha Cusaama Bin Ladin wuxuu dhashay sanadkii 1979-kii bisha iyo maalinta lama hayo, sanadihii 1991-kii ilaa 1996-kii wuxuu Aabihiis la joogay wadanka Suudaan xiligaasi oo Cusama laga musaafuriyey wadankiisa Sacuudiga.
Markii Aabihiis uu u guurey Afgaanistaan wuu sii raaciyey, isagoo 16 sano jir ah ayaa waxaa wadanka Afgaanistan ku wareystey wariye Hamid Mir oo u dhashay Pakistan isla markaana wax ka qora arimaha waxa loogu yeero argagixisada su’aal uu waydiyey Hamid Sacad Bin Ladin ayaa aheyd isagoo xiligaasi qori AK 47 ah sita “Ma Raacaysaa dhabaha Aabaha uu qaadey?,
Sacad wuxuu ku jawaabay, “maya ma raacayo ee waxaan raacayaa dhabaha Rasuulkeena CS”.
Sacad Bin Ladin waxaa loo badinayaa in uu noqonayo hogaamiyaha Al-qaacida oo uu badalo Aabihiis, iyadoo ay dhici karto in sidaasi loo sameeyo sababo ay ka mid tahay in magaca Bin ladin aanu harin ama minguurin oo aanu ka dhextirmin shabakada Al-Qaacida & dhagaha Aduunka oo sidiisa u taagnaado, waxaana loo badiyaa in ay sidaasi ku gaaran go’aan madaxda Al-Qaacida.
Laakiin in la helo hogaamiye aan Carab aheyn ayaa ah mid meesha ku jirta iyadoo ay jirto guux weyn oo ka soo baxaya hogaamiyeyaasha Al-Qaacida oo aaminsan in xiligan ay tahay in madaxa Al-qaacida uu noqdo nin ka soo jeeda wadamada aan Carabta aheyn, waxaana taasi ay muujinaysa in uu fursad haysto Ilyas Kashmiri.
Ilyas Kashmiri waxaa kaloo loo yaqaan magacyada Maulana Ilyas Kashmiri, & Muhammad Ilyas Kashmiri wuxuu dhashay 10-kii bishii February sanadkii 1964, wuxuu ka soo jeedaa gobolka Kashmir ee ay ku muransan yihiin Hindiya & Pakistaan.
Ilyaas wuxuu madax u yahay ururka Harkat-ul Jihad Islami (HUJI), laakiin tan iyo markii uu dhisay guutada 313 wuxuu ka mid noqdey hogaamiyeyaasha muhiimka ah ee Al-Qaacida.
Telefishinka NBC ee Mareykanka laga leeyahay wuxuu baahiyey in Ilyas Kashmiri uu noqon karo ninka badalaya Cusaama Bin Ladin.
Ururkiisa HUJI wuuxu gacan saar la leeyahay Al-Qaacida waxaana ururkiisu ay ka fuliyeen hawlgalo wadamada Pakistan, Hindiya, Afgaanistaan & Bangladesh.
Sanadkii 2010 Mareykanku waxay Kashmiri ku dareen liiskooda waxa loo yaqaan argagixisada caalamiga ah isagoo lagu oogay kaalintiisa la macaamilka Al-qaacida.
Rag badan oo ka mid ah hogaamiyeyaasha Al-qaacida oo ka soo jeeda wadamada aan Carabta aheyn ayaa sheegaya in Kashmiri ku haboon yahay xilka uu ka geeriyoodey Cusama waxaana ay ku doodayaan in laga soo bilaabo hogaamiyihii weynaa ee dagaalkii Afgaanistaan Cabdalla Cazzam ay madax ka ahaayeen kacdoonka Islaamiga ah rag Carbeed xiligana ay tahay in la helo hogaamiye aan Carab aheyn, waana taasi mida dhabaha u xaaraysa Ilyas Kashmir.
Laakiin cabaqada uggu weyn ee hortaal waxay tahay hogaamiyeyaasha Carbeed oo al-Qaacida madaxda u ah oo aaminsan in ay leeyihiin ururkaasi ayna jirin cid kale oo ay ku aaminayaan, waana taasi mida sheeda ka saaraysa Ilyaas Kashmiri.,
Anwar al-Awlaki oo ku dhashay magaalada Las Cruses ee Gobolka New Mexico ee wadanka Mareykanka 22-kii bishii April sanadkii 1971 waa hogaamiyaha Al-qaacidada gacanka Carbeed waa nin haysata dhalashooyinka Mareykanka & Yemen, wuxuu ka mid yahay ragga la filan karo in ay badalaan Cusaama Bin Ladin.
Anwar waxaa lagu tuhunsan yahay in uu maleegay falal qarbudaad ahaa oo ka dhan ahaa danaha Mareykanka & isku day lagu doonayey in lagu qaarijiyo safiirka Britain u fadhiya Yemen, sidoo kale waxaa lagu tuhunsan yahay in uu fariimaha Internet-ka uu ugu adeegsado hawlgalinta dhalinyarada.
Abdullah Ahmed Abdullah oo sidoo kale loo yaqaan Abu Mariam, Abu Mohamed Al-Masri, & Saleh, ama Saleh Gamal waa Masaari wuxuu dhashay sanadkii 1963-dii waxaa loo haystaa in uu ku lug lahaa weeraradii qarax ee lagu qarxiyey safaarada Mareykanka ee Kenya & Tanzania waxaa kaloo jira warar sidoon oo sheegaya in uu Soomaaliya tagey oo uu ka qayb qaatey tababaro.
Abdallah xiligan wuxuu u qaabilsan yahay Al-qaacida dhinaca dhaqaalaha hawlgalinta, isha ayaa lagu hayaa, laakiin ma ahan nin sidaasi caan u ah, waxaa kaloo ku keeni kara caqabad Ayman A Zawaheri oo ay isku wadan ka soo jeedaan, laakiin karti uu ku dhexyeeshay hawlgalada Al-qaacida iyo maamulida dhaqaalaha hawlgalada ayaa ka dhigay in uu yahay nin muhiim ah gulufka hawlgal ee Al-Qaacida, waana nin ka caafimaad wanaagsan ragga ay isku maqaamka yihiin sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo.
Adnan Gulshair el-Shukrijumah Waxaa kaloo loo yaqaan ?Adn?n Shukr? Juma?ah Adnan lama hayo halka uu ku dhashay laakiin wuxuu dhashay August 4, 1975) wuxuu ku koray gobolka Florida ee dalka Mareykanka oo ay degan yihiin qoyskiisa, sanadkii 2003-dii ayuu ku soo baxay liiska FBI-da ee dadka lagu tuhmayo falalka argagixisada waxaana lagu soo oogay in la soo qabto, ilaa iyo xiligaasi wuu baxsanayaa.
Sacuudigu waxay sheegeen in Adnan Gulshair el-Shukrijumah aanu aheyn muwaadin Sacuudi a, taasi oo ku timid markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu yahay Sacuudiyaan, wuxuu adeegsadaa baasaboorka wadanka Guyana ee ku yaal Koonfurta Qaarada Ameerika (Latin America), waxaase jira warar sheegaya in uu isticmaalo baasaboorada Sacuudiga, Canada & waliba jasiirada Trinidad.
Adam Yahiye Gadahn waxaa kaloo loo yaqaan ?dam Ya?y? Ghadan wuxuu ku dhashay Oregon oo ka tirsan Mareykanka 1-dii bishii Septmber 1987d-ii, waa wiil ay dhaleen qoys Kirishtaan & Yuhuud ahaa, waxaana awowgiis uu ahaa Yuhuud.
Intii aanu muslimin waxaa la oran jirey Adam Pearlman,Awowgiis waa Musikiiste caan ahaa oo lagu magacaabi jirey Philip Pearlman.
Adam Yahiye Gadahn isagoo 17 sano jir ah ayuu Islaamay isagoo ay ku bidey neecowda Islaamniyada isagoo yar, sanadkii 1995-kii ayuu Islaamay.
Sanadkii 1998-kii ayuu ku biiray Al-Qaacida waxaana uu la tagey halkaasi aqoontiisii dhinaca farsamada IT-ga (Information Technology) sidoo kale arimaha warbaahinta ayuu u lahaa aqoon waana taasi mida keentey inuu Cusaama Bin Ladin u noqdo la taliyaha warfaafinta.
Adam waxaa kale oo uu noqdey afhayeenka Al-Qaacida isagoo soo saari jirey fariimaha muuqaalka & maqalka ah ee hogaamiyeyaasha Al-qaacida.
Adam fursdaha uu haysto waxaa ka mid ah aqoontiisa, isagoo luuqado badan yaqaan, firfircooni uu ku dhexyeeshay Al-Qaacida tan iyo markii uu ku soo biirey, Cusaama Bin ladin wiilashiisa oo ay isagu dhawyihiin, isla markaana kalsooni badan uu ka haystey Cusama.